Madaxweyne Rayaale Oo Cadeeyay Inay Xukuumadiisu Joojisay Munaasibadii Xuska 18 May ee Maalinta Qaranimada Somaliland | Araweelo News Network (Archive) -
Madaxweyne Rayaale Oo Cadeeyay Inay Xukuumadiisu Joojisay Munaasibadii Xuska 18 May ee Maalinta Qaranimada Somaliland
Monday 17 May 2010a
Hargeysa (ANN)-Madaxweyne Daahir Rayaale Kahin ayaa cadeeyay in aan maalinta berrito ah la xusi doonin munaasibada 18 May oo ku beegan Maalintii ay Somaliland lasoo noqotay Xoriyadeedii. Ka dib markii shirweynihii beelaha Somaliland lagaga dhawaaqay magaalada Burco sanadkii 1991-kii 18May, taas oo loo asteeyay in la xuso sanad kasta maalintaa oo ay Somaliland gooni isu taageeda dib ugala soo noqotay dalkii la isku odhan jiray Somaliya.
Madaxweyne Rayaale waxa uu sidaa ku sheegay kulan uu saxaafada qaarkood ugu yeedhay oo uu cawaeyskii caawa ku qabtay xarunta madaxtooyada Somaliland, kaas oo uu diiday inay weriyayaasha ka qayb galay weydiiyaan su’aalo la xidhiidha sababta ay xukuumadiisu u joojisay qabashada xuska maalintaa qiimaha badan. Balse waxa keliya ee uu madaxweyne Rayaale cadeeyey in aan maalinta berrito ah la xusi doonin maalinta qaranimadda Somaliland ee 18-ka May, isagoo ku sababeeyey in ay dalka ka socoto kaadhadh qaybinta codbixiyayaasha doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan 26-ka bisha June ee soo socota, waxaanu dadweynaha ku wargeliyey in aanay jirin wax dabaaldeg ahi.
Sanadguurada 18 May ee maalinta beri ku beegani waa sanadguuradii 20aad ee kasoo wareegtay maalintii ay Somaliland lasoo noqotay qaranimadeeda waana markii ugu horaysay ee aan la xusin taariikhda Somaliland, iyadoo xusaska maalmaha mihiimka ah ee Somaliland munaasibadaha lagu xusaa soo diciifayeen tan iyo mudadii ay xukunka gacanta ku qabteen kooxda xukuumada Rayaale.